उत्तर कोरियासँगको विकल्प ‘सैनिक समाधान’: ट्रम्प - TV Annapurna
यस्तो छ राष्ट्रियस्तरका नेताहरुको रोचक चुनावी प्रतिस्पर्धा
उत्तर कोरियासँगको विकल्प ‘सैनिक समाधान’: ट्रम्प
August 11, 2017 Annapurna TV
अमेरिका । उत्तर कोरियासँगको विकल्प ‘तयारी अवस्थामा वन्द’ रहेको हतियार भएको शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताउनुभएको छ ।
यही बर्षको जुलाईमा उत्तर कोरियाले लगातार दुई अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि प्योङ्याङ र अमेरिकाबीच तनाव चुलिउको छ । सिन्ह्वा
शर्मा थुनामुक्त: शर्माउपर गरिएको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन ?
ख्याल गर्नुहोस है ! यि खतरनाक रोगहरु लाग्ला, जसले मानिसको निदाएकै बेला प्राण जान्छ
विख्यात अमेरिकी फिल्म शृंखला ‘स्टार वार्स’की अभिनेत्री क्यारी फिसरको निधनको मुख्य कारण ‘स्लिप एप्निया’ रहेको चिकित्सकहरूले...
काठमाडौं । भारत, कोलकातामा रहेका नेपालीहरुको संस्था भारत–नेपाल जनमैत्री सांस्कृतिक मञ्च कोलकाताबाट स्थापित संयुक्त नेपाली वेलफेयर...
जापानमा आमनिर्वाचनको मतदान हुदै
टोकियो । जापानमा आइतबार मध्यावधी निर्वाचनका लागि मतदान सुरु भएको समाचार छ । आइतबार बिहानैदेखि मतदान सुरु...